Welcome to Aayaha Nolosha » DAAWO: WARBIXIN KU SAABSAN SIDA LOOGA CIIDAY MAGAALADA OSLO.
June 6, 2019 - Waxaa Qorey : Bile Mohamed -
Iyadoo maanta ay ku began tahay maalinta koowaad ciidul fidriga taasoo ay u dabaal dagayaan malaayiin muslimiin ah oo ku kala nool daafaha dunida ayaa magaalada Oslo ee caasimada dalka Norway waxaa fagaare ku yaala magaaladaani isugu soo baxay kumanaan qofood oo ay ka mid ahaayeen Soomaalida ku nool magaalada Oslo, waxaana salaadii halkaas ku tujiyey imaamka masaajidka Towfiiq Sheekh Cali Maxamed Saalax.
Farxada iyo damaashaadka maalinta ciida ayaa waxa ay aheyd mid maanta laga dareemay guud wadanka Norway waxayna qeybaha kala duwan ee bulshada isugu hambalyeeyeen munaasabada ciida.
Dadkii aan la kulmay salaada ciida kadib waxaa ka mid ahaa Xildhibaan Baashe Muuse oo ka mid ah mudanayaasha golaha deegaanka Magaalada Oslo isla markaana si weyn looga yaqaan guud ahaan dalka Norway waxa uuna Soomaalida u rajeeyey inay sanadkan kiisa xiga ku gaaraan caafimaad, barwaaqo iy nabad.
Sidoo kale Madaxa dacwada masjidka Towfiiq Ustaad Abuukar xasan Maxamed ayaa dhankiisa u hambeeyey guud ahaan muslimiinta caalamka si gaar ahaaneed Soomaalida wuxuuna sheegay in ka towfiiq ahaan xil weyn ay iska saareen sidii Ummadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Oslo iyo nawaaxigeeda inay meel qura ku wada ciidaan.
Qaar ka mid ah dadkii ka qeyb galayay dukashada salaada ciida oo la hadlay Goobjoog tv waxay si weyn u soo dhaweeyeen isla markaana isugu hambalyeeyeen Farxada ciidul fidriga.
Guud ahaan marka laga tago Magaalada Oslo, magaalooyinka kale ee dalka Norway ee maanta sida weyn looga ciiday waxaa ka mid ah magaalada Bergen oo ah caasimada labaad, Stavanger, Trømso iyo Tråndaham ayaa ka mid ah goobaha maanta ayagana looga dabaal dagay munaasabada ciidul fidriga.
Salaad Daacad, Oslo Norway.